09/17/12 ~ Myanmar Forward
KIA မှ ဆက်ကြေးကောက် ၊ လူသစ်စုကြောင်း ဦးလနန်မှ ပြောကြား
Posted by drmyochit Monday, September 17, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
RFA နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ဦးလနန်အနေနဲ့ ဆက်ကြေးကောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး ၊ အခွန်ကောက်ခံတာ ၊ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ပေးကြတာဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအတွက် ယခုလို မေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
ယခင်တုန်းကတော့ အခွန်ပဲကောက်တယ် ။ လူမသတ်ဘူး။ တပ်သားသစ်အနေနဲ့ မခေါ်ဘူး။ အခု အခြေအနေက မဖြစ်နိုင်တဲ့ ငွေပမာဏကို မပေးမနေရ အတင်းအကြပ် တောင်းတယ်။ ဘယ်သူမဆို စီးပွားရေး လုပ်ပြီဆိုမှတော့ ငွေလိုချင်လို့ လုပ်ကြတာပါ။ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ အခွန်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အသတ်ခံရမှာ ကြောက်လို့သာ အခွန်ဆောင်တာပေါ့။ KIA အဖွဲ့ အခွန်ကောက်ခွင့်ကို ကုလသမဂ္ဂက တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်က တရားဝင် ပေးထားတာလား ဆိုတာတော့ ပြည်သူများအားလုံး သိကြမှာပါ။
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးအား တပ်သားသစ်စုတာနဲ့ ပက်သက်လို့ “ ကျွန်တော်ကတော့ သတိမထားမိဘူး ” “ကိုယ်ဝန်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို တပ်သားသစ်စုသွားတယ် ဆိုတာ မှားယွင်းမှုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ ဘာတစ်ခုမှ ရေရေရာရာ မရှိတဲ့စကားတွေ အသုံးသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာမှမသိရင် ဘာမှမပြောတာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ ပြောလာခဲ့ရင်လည်း ဘယ်သူမှ ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ KIA ကဒီလောက်လူသတ် ၊ ဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလူမျိုးကမှ KIA မကောင်းကြောင်း ပြောရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့မိသားစုဝင် တစ်ဦးဦးနဲ့ တကယ်ပတ်သက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ RFA ကို သွားပြောခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
KIA က တပ်သားသစ်စုတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ စုဆောင်းတယ်လို့ ဦးလနန်မှ ပြောသွား ခဲ့ ပေမယ့် မိုးကောင်းမြို့နယ် ၊ ထိုးပူရွာဘက်မှာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ လယ်လုပ်သူ၊ ကလေး လူကြီး တွေအပြင် မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်း ရွှေမှော်တွေမှာ ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ရွှေတွင်းလုပ်သား အသက် ငယ်တဲ့သူတွေ ပြန်ရောက်လာတယ် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။တစ်နည်းတော့ ရှိတယ် ။ ငွေ နဲ့ပြန်ရွေးရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တွေ့တဲ့နေရာမှာ အတင်းဆွဲခေါ် ဖမ်းဆီးပြီးခေါ်သွားမှတော့ ဦးလနန်ပြောတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတို့ ၊ အသက် (၁၈)နှစ်အောက်တို့ ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့သူတို့ ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမမရှိတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသား/သမီးတို့၊ KIA ထဲမှာ အမျိုး တစ်ယောက်ယောက်ရှိတဲ့သူတို့ ဆိုတာတွေကို ဘယ်သူကစိစစ်လို့လဲ။ ဒါမှမဟုတ် တပ်သားသစ် သင် တန်းရောက်တော့လဲ မေးမြန်းလို့ သိခဲ့ရင်တောင် ဘယ်တုန်းက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ဘူးလို့လဲ ။ ဦးလနန် စာတွေ ဖတ်ပြသွားတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုဆို တပ်သားသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖားကန့်ကဖမ်းသွားတဲ့ တပ်သားသစ်တွေထဲမှာ NLD ပါတီက သူတွေတောင် ပါကုန်ပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးကို ငွေ (၂၅၀၀၀) ကျပ်နဲ့ NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက် ခံစာပြပြီး မိဘတွေက ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးလနန်ပြောတဲ့ တပ်သားသစ်စုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေမှာ “NLD ပါတီဝင်” ဖြစ်ရင် ပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ကချင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်သွားတဲ့အပေါ် ဦးလနန်ပြောကြားချက်အရ “ စုံစမ်း ရေး ကော်မရှင်ဟာ မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပဲ မေးမြန်းမှုတွေ ၊ လေ့လာမှုတွေ လုပ်တယ်” ဆိုတော့ တောထဲက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ သွားမေးရင် ဘယ်သူက အသက်အာမခံပေး မှာလဲ။ ပြောတဲ့သူ ကရော အမှန်အတိုင်း ပြောရဲပါ့မလား။ အခုမိခင် ဗိုက်ထဲမှာ (၃) လပဲရှိသေးတဲ့ ခလေး ကိုတောင် ကြိုတင်ပြီး တပ်သားသစ်စုမှတော့ ကျန်တဲ့သူတွေဆို ပြောမနေပါနဲ့တော့။
KIA ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ဆက်ကြေးကောက်၊ လူသစ်စု တာတွေကို RFA နဲ့မေးမြန်းခန်းမှာ အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်မခံလို့ မရတော့လို့ ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် KIA ရဲ့ တကယ့်လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ ဖွဖွလေးပဲ ပြောကြား ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ အခြားသတင်းဝက်ဆိုဒ်တွေနဲ့ အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ပလူ ပျံအောင် ပေါ်ထွက် လာပြီဖြစ်တဲ့ ဆက်ကြေးကောက် ၊ လူသစ်စုတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကတော့ KIA ရဲ့ ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်တွေ ကန့်လန့်ကာ ဖွင့်ချလိုက်သလို ရှင်းရှင်းကြီး ပေါ်လာတာဘဲ ဖြစ် ပါတယ်။
လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ မိုးကောင်းကင်ကြီးပဲ ရှိသတဲ့လား
Posted by drmyochit Monday, September 17, 2012, under သတင်းများ | No comments
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဆို တခု ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် သူရဦးအောင်ကိုက လက်ရှိ ပြဋ္ဌာန်းထားဆဲ ဖြစ်တဲ့ စာချွန်တော်အမိန့်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တချို့ကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုပြီး တင်ပြတဲ့ အဆို ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆိုရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၇၊ ၃၇၈ မှာ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ တရားရုံးတွေရဲ့ ဖြေရှင်းပေးမှုမျိုးနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ယူဆရင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို စာချွန်တော်အမိန့်တွေ ထုတ်ဆင့်ပေးဖို့ လျှောက်ထားနိုင်တယ် လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် အသက်ဝင်လာအောင် ပြည်ထောင်စု တရား လွှတ်တော်ချုပ်ဟာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တချို့ကြောင့် ပြည်သူတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ အခွင့်အရေး ပေးပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မခံစားရလို့ ဆိုပြီး တချို့ အချက်တွေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ သူရဦးအောင်ကိုက အဆို တင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတခု တင်တယ်၊ အမတ်တွေက ငြင်းကြ ခုံကြ ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဘက် ဒါမှမဟုတ် တရားရေးဘက်ဆိုင်ရာက လာရောက် ဖြေရှင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တခုခု ချလိုက်တယ်ဆိုရင် သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်အတွင်းမှာ သူရ ဦးအောင်ကို နဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ပြောဆိုကြတာတွေ၊ လတ်တလော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနေတာတွေမှာ ထူးခြားချက်တွေ ရှိနေတာမို့ ဒီအကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြသွားပါ့မယ်။
အဲဒီနေ့မှာ အဆိုပါ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ စာချွန်တော် အမိန့်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တချို့ကို ပြင်ဆင် သင့် မသင့် အမတ်တွေက ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
အမတ်တွေ ဆွေးနွေးအပြီးမှာ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးက ပြင်ဆင်ဖို့ အဆိုပြုထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းထားရတယ်၊ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ရှိတယ် စသ ဖြင့် သေသေချာချာ ရှင်းပြပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီ ရှင်းလင်း တင်ပြချက် အပြီး အဆိုရှင် သူရဦးအောင်ကိုက သူ့ရဲ့ သဘောထားကို တင်ပြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ပြန်ပြီး တင်ပြရာမှာ ရိုးရိုးတင်ပြတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို တိုက်ခိုက် ပုတ်ခတ် ပြောဆိုတာကနေ အစ ပြုပါတယ်။ သူက ” ဒီ အခြေအနေဟာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နဲ့ အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အများပြည်သူအကျိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို လိုလားတဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နဲ့ စနစ်ဟောင်းပေါ်မှာ ပြန်လည် ဖက်တွယ်ထားလိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှု တခုလို့ ဆိုလို့ရှိရင် မှားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ခါတိုင်း အမတ်တွေ စိတ်ပါလက်ပါ ဆွေးနွေးပြောဆိုရင်း ဟန်အမူအရာ ပါလာ၊ အသံတွေ ကျယ်သွားတဲ့ အခြေအနေ အောက်မှာ မကြာခဏ သတိဝင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းကလည်း နှုတ်ပိတ်ပြီး နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးတွေ ဆိုတာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၉ အရ သမ္မတက နာမည်စာရင်း တင်သွင်းပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ အတည်ပြုချက်နဲ့ ခန့်အပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သူရဦးအောင်ကို ပြောသလိုဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေလိုပဲ တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးတွေကိုတောင် စွပ်စွဲပြစ်တင်ရမလို ဖြစ်နေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက သူရ ဦးအောင်ကိုက ဆက်ပြောပါသေးတယ်။
“ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သည် ပြည်သူသန်း ၆၀ ရဲ့ ကိုယ်စား အာဏာကုန် လွှဲအပ်ပေးထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း ခုံရုံးမှ မရှိပါဘူး။ ခက်မသုံးဖြာ အချုပ်အခြာရဲ့ မူလ ပိုင်ရှင်က လည်း ပြည်သူများကနေ အာဏာကုန်လွှဲအပ်ပေးထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ မိုးကောင်းကင်ကြီးပဲ ရှိပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။ သူရဦးအောင်ကိုရဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ မိုးကောင်းကင်ကြီးပဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စကားအဆုံးမှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်တွေရဲ့ လက်ခုတ်သံ ညံသွားတာကိုလည်း ကြားလိုက်ရပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ သူရဦးအောင်ကို ပြောလိုက်တဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ (က) မှာပါတဲ့ “နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာ အာဏာ၏ ခက်မ ၃ ဖြာ ဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေး အာဏာတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ပိုင်းခြား သုံးစွဲခြင်းနှင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းခြင်းတို့ ပြုသည်” ဆိုတာကို ဥပက္ခာ ပြုလိုက်တာလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူတို့ လွှတ်တော်ဆိုတာ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်၊ ဘယ်ခုံရုံး ဘယ်တရားရုံး ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှ လိုက်နာစရာ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း သက်ရောက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လွှတ်တော်ဆိုတာ တိုင်းပြည်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းမယ်၊ ဒီ ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ဥပဒေတွေအတိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးအပိုင်းက လိုက်နာ မလိုက်နာ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုသလို လွှတ်တော်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေ ဟာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီ မညီ၊ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာ မလိုက်နာ စတာတွေကိုလည်း တရားစီရင်ရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လက်မခံတာဟာ မဏ္ဍိုင်တွေ အချင်းချင်း ထိန်းကျောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို လက်မခံရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ထဲက ကြံ့ခိုင်ရေး အမတ်တွေ ခုလို ဖြစ်နေတာဟာ ဆန်းတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒီ အမတ်တွေ လွှတ်တော်ထဲ ဘယ်လို ရောက်လာတယ် ဆိုတဲ့ အဖြေ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေက တကယ့်ကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မဟုတ်တာ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးဆိုတာထက် ကိုယ့်အကျိုး၊ ကိုယ်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အကျိုးစီးပွားတွေ လုပ်ရင်း ခုလို အခြေအနေ ဆိုက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတဖက်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် သမ္မတ ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဖေ့ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းပွဲတွေအကြောင်း ဖော်ပြလာတာ သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ သမ္မတရုံးဘက်က ပြောချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေး အမတ်တွေ လက်ရှိ လုပ်နေတာကို လွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော်သား အမတ်တွေ သဘော မတူကြဘူး၊ ဒီ အကျပ်အတည်း ဟာ ခေတ္တခဏ ဖြစ်စေ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ကို ၀င်ထိန်းရမယ့် အခြေအနေ ရောက်သွားနိုင်တယ် ဆိုပြီး သတိပေးလိုက်တဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေ၊ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ဆောင်ရွက်နေသူတွေ အနေနဲ့ လက်ရှိ လွှတ်တော်ထဲက ကြံ့ဖွံ့အမတ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန် ထောက်ပြတာ ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပေးမှုတွေ လုပ်တာ စတာတွေကို အချိန်မဆိုင်း လုပ်သင့်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by drmyochit Monday, September 17, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
၇ ရက်သတင်းဂျာနယ်တွင် အမြန်ပါရှိရေးတောင်းဆိုချက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မှာ ပြုလုပ်မည့် ဆန္ဒပြပွဲတွင်ကြွေးကျော်မည့် (စစ်ပွဲတွေရပ်ခိုင်းတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KIA နှင့် တပ်မတော်ကြား ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲအကြောင်း ဘာတွေသိလို့ ဘယ်လောက်ထိသိလို့ စစ်ပွဲရပ်/ ထိုးစစ်ရပ်လို့ အော်ကြမှာတုန်း / ဆန္ဒပြကြမှာတုန်း ကချင်ပြည်နယ်နေ ဒေသခံဖြစ်တဲ့ ရှမ်း/ မြန်မာလူမျိုးအနေနဲ့ ခံစားရတဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်စား များများကြီးမရေးမပြောချင်ဘူး။ ဆန္ဒပြကြပါ ကြွေးကြော်ကြပါ။ ထိုးစစ်တွေရပ်လို့ အော်ရင်လည်းအော်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည့်စုံအောင်တော့ အော်ကြဗျာ။ ပြည်မထဲကစစ်အကြောင်းမသိတဲ့ မြန်မာတွေ ကချင်နယ်မှာရောက်နေတဲ့ ရှမ်း/ မြန်မာ စီးပွါးရေးသမားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာရင်ပေါ့။ ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုအော်ပေးပါ ( စစ်ပွဲတွေ ရပ် ရပ်.၊ ထိုးစစ်တွေ ရပ် ရပ်။ ) ( တပ်မတော်လည်း ထိုးစစ်ရပ်၊ KIA / KIO လည်း ချောင်းပြစ် မိုင်းထောင် လမ်းတံတား ဖျက်ဆီးတာတွေရပ် ) ( ရပ် ရပ် တပ်မတော်လည်း ထိုးစစ်ရပ်၊ KIA / KIO လည်းသင်္ကါမကင်းလို့ လူသတ်တာတွေရပ်၊ ဆက်ကြေးကောက် အနိုင်ကျင့် ခြိမ်းခြောက်တာတွေရပ်။) လို့ အော်ပေးကြပါ။ (((ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံများကိုယ်စား ဒေသခံတစ်ဦး ))) 7Daynews ဂျာနယ်သည် အမှန်တစ်ကယ် ပြည်သူများပေးပို့မှန်သမျှကို တိကျစွာဖော်ပြနေသည်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သဖြင့် ပေးပို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ((( မိုးကောင်းသား ၊ ကချင်ပြည်နယ် )))
မိုးသီးဇွန် ဘာကြောင့် ပြည်တော် ပြန်ဝင်ရတာလဲ။
ကျနော်က သတင်းဌာနက မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးပဲ သိသင့် သိထိုက်တာမို့ ပြန်လည် မျှဝေတာပါ။ ပေးပို့သူကတော့ အမည် မဖော်လိုသူ တစ်ယောက် ပေးပို့လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကို မိုးသီးဇွန် ဂျာမနီကို သွားပြီးတော့ မွတ်စလင် အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းစည်းကာ တောင်းစားရေးနဲ့ ပေါင်းစားရေး အစည်းအဝေးမှာ အမှတ်တရ ရိုက်ထားတာပါ။ ပေးပို့သူက အဲဒီပုံကို ဒီလို မှတ်ချက် ပေးထားပါတယ်။
ရှိတယ်..သူတို့ တွေက အမြဲဆက်သွယ်ပြီး မူစလင်တိုင်းပြည်တွေက ငွေတွေ ယူပြီး တွဲလုပ်နေကြတယ် )))
အခု ကျနော်က မိုးသီးဇွန်ကို မုန်းလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့လည်း ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘာကြောင့် ပြန်ဝင်လာရသလဲ။ သူပြန်ဝင်လာတော့ အောက်က အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာလို့ ကြိုဆိုကြတာလဲ ဆိုတာကို ယှဉ်ပြီးတော့ နှိုင်းပြချင်လို့သာ တွဲတင်လိုက်တာပါ။ ပုံမှာ ပါတဲ့ သူကိုလည်း ယှဉ်ကြည့်ကြပါ။
Posted by drmyochit Monday, September 17, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တောင်တရုတ်နဲ့ ​အရှေ့တရုတ်ပင် လယ်ပြင်မှာ ​တရုတ်နဲ့ ​ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံကြား ပိုင်ဆိုင်မူ ​ဆက်လက် အငြင်းပွား နေကြမယ် ဆိုရင် ​နှစ်နိုင်ငံကြား ​စစ်တောင်ဖြစ်လာနိူင် တယ်လို့ ​အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ​သတိပေး လိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်ကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြသူ တရုတ်နိုင်ငံသားများ
တောင်တရုတ်နဲ့ ​အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်က ​ကျွန်းတွေကို ​တရုတ်နဲ့ ​ ဂျပန်တို့က ​ပိုင်ဆိုင်မူ ​အငြင်းပွားနေပြီး ​နှစ်ဖက်စလုံးက ​တဦးပေါ်တဦး ရန်စတဲ့အပြုအမူတွေ ​လုပ်နေတဲ့အတွက် ​စစ်ဖြစ်နိူင်ပြီး ​တခြားနိုင်ငံတွေပါ ပါဝင်လာတဲ့အထိ ​ပြဿနာရှိနိူင်တယ်လို့ ​အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ​Leon ​Panetta ​က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မူအငြင်းပွားနေတဲ့ ​ကျွန်းကို ​ဂျပန်က ​ဝယ်ယူမယ်လို့ပြောပြီးနောက် ဂျပန်ကို ​ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ​ရက်ဆက်ဆိုသလို ​ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမူတွေ ​လုပ်နေပါတယ်။
ဂျပန်ကို ​ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမူတွေ ​တရုတ်နိုင်ငံတလွှားမှာ ​ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ​တရုတ်နိုင်ငံတွင်းရှိ ဂျပန်နိုင်ငံသား တွေနဲ့ ​ဂျပန်စီးပွားရေးတွေကို ​လုံခြုံရေးအပြည့် အဝပေးဖို့ ​ဂျပန်အစိုးရက ​တရုတ်အစိုးရကို ​ပြောလိုက်ပြီးနောက် ​အမေရိကန်နိုင်ငံက ခုလို ​သတိပေးချက်တွေ ​ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ကြီး ​၈၀ ​ကျော်က ​ဆန္ဒပြတရုတ်ပြည်သူတွေက ​ဂျပန်လူမျိုးတွေ ​ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ ​ပြောဆိုနေပြီး ​စနေနေ့ တုန်းက ​ဂျပန်သံရုံးကို ​ကျောက်တွေ၊ ​ရေဗူးတွေ၊ ​ကြက်ဥတွေနဲ့ ​ပစ်ပေါက်ပြီးနောက် ​လုံခြုံရေးတွေ တင်းကြပ်ထားပါတယ်။
တချို့မြို့တွေမှာတော့ ​ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ​ဆက်စပ်မူရှိတဲ့ ​ဈေးဆိုင်ကို ​ဝင်ရောက် လုယူမူတွေနဲ့ ကားရောင်းဝယ်ရေး ဌာနတခုကို ​မီးရှို့ဖျက်ဆီးမူတွေ ​လုပ် ခဲ့ကြောင်းလဲ ​သိရပါတယ်။
""မလေးသွား မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၂၅ဦးဖမ်းဆီးခံရ""
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်စပ်မြို့ ကော့စ်ဘဇားခရိုင် တက်ကနက်မြို့နယ် အတွင်းမှ မလေးရှားသို့ တရားမ၀င် ထွက်ခွာရန် ကြိုးစား ခဲ့သူ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား၂၅ဦးကို ဘီဂျီဘီအမှတ်(၂၄) တပ်ဖွဲ့မှ ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
တက်ကနက်မြို့နယ်ရှိ ဂျာလီယာရွာပွိုင့် ရှာပူရီကျွန်းမှ စက်တင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့ မနက်အာရုဏ် ၃နာရီ အချိန်တွင် ငါးဖမ်းဘုတ်တ စီးဖြင့်ထွက်ခွားနေစဉ် ကင်းလှည့်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဘီဂျီဘီအမှတ် (၄၂)တပ်ဖွဲ့ လျှို့ဝှက်သတင်းအရ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခံထားသူများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ ၁၇ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ဦးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၁၇ဦးကို တက်ကနက် ရဲဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ၄င်းတို့နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဘီဂျီဘီပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ လူကုန်ကူမှုဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား ၇ဦးကို တက်ကနက် ရဲဌာန၌ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု သိရသည်။
လှပကျော့ရှင်းသည့် အမျိုးသမီးတဦး၏ ရင်သားအလှကို နေ့စဉ် (၁၀)မိနစ်စီ ကြည့်ရှုခံစားခြင်းသည် အမျိုးသားများအတွက် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေါက်တာ ၀ီသာဘီ ဦးဆောင်သော ဂျာမနီနိုင်ငံ ဆေးရုံ(၃)ခုမှ ဆရာဝန်များသည် အမျိုးသားအယောက်(၂၀၀) တို့၏ နေ့စဉ် ဓလေ့စရိုက် များကို (၅)နှစ် အချိန်ယူ လေ့လာခဲ့ကြရာ ၎င်းတို့အနက် ထက်ဝက်သည် မနက်လင်းချိန်တွင် အရင်ဆုံး မြင်ချင်သည့် ကိစ္စမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလှသည့် အမျိုးသမီးတဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်အလှဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပြီး ကျန်တ၀က်မှာမူ ထိုကိစ္စအတွက် ထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ
ပညာရှင်များသည် ပထမအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ၎င်းတို့ ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီး ကျန်အဖွဲ့ကိုမူ နှစ်သက်ရာ အာရုံအလိုက် ခံစားခွင့်ပေး ထားသည်။
(၅)နှစ်ကြာပြီးနောက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အမျိုးသမီးများ၏ လှပသော ရင်သားကို အရသာခံ ကြည့်ရှုခွင့်ရသည့် အမျိုးသားများသည် သွေးဖိအား ပြဿနာ၊သွေးကြောနှင့် ဆိုင်သောရောဂါများ၊ သွေးခုန်နှုန်း မမှန်ကန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
(Photo: New England Journal of Medicine)
လိင်နှင့်ဆိုင်သည့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် နှလုံးအား ပိုမိုလှုပ်ရှား သက်ဝင်စေကာ သွေးလှည့်ပတ် စီးဆင်းမှုကို လျင်မြန်ကောင်းမွန်စေသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း လိင်စိတ်ကို လှုံဆော်ပေးနိုင်သည့် ရင်သားအလှကို နေ့စဉ် ခံစားထိတွေ့နေသည့် အမျိုးသားများအတွက် ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်နေသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုသည့် ရလဒ် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဝီသာဘီက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ထိုအပြုအမူကို ကာလရှည်ကြာ ပြုလုပ်ပါက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်မျှ ကျဆင်း နိုင်သည်ဟုလည်းဆိုသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ဒေါက်တာဝီသာဘီက အမျိုးသားများ (အထူးသဖြင့် အသက် ၄၀ ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များ)သည် D-Cup အရွယ်၊ သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော အမျိုး သမီးရင်သားများကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း (၁၀)မိနစ်မျှ ခံစားကြည့်ရှု သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်ကို ဂျာမဏီနိုင်ငံထုတ် နယူးအင်္ဂလန် ဆေးပညာ ဂျာနယ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အမေရိကန် တပ်သား အယောင်ဆောင် ပြီး တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ဗြိတိသျှ စစ်သား လေးဦး နှင့် မရိန်း နှစ်ဦး သေဆုံး
၊အာဖန်ဂန်နိုင်ငံ၊ ဟဲမန့်ပြည်နယ် Nahr-eSaraj ခရိုင်အတွင်းရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင် ထားသည့် တာလီဘန် အကြမ်းဖက် သူတို့၏ တိုက်ခိုက် မှုကြောင့်အမှတ်(၃)ရှော့ရှိုင်းယား ဗြိတိသျှ
တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ် ဦး နှင့် အမေရိကန် စစ်သား လေးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Fox News ရုပ်သံမှကြေညာခဲ့သည်။
လေ့ ကျင့် မှု လည်း အပြည့် ရှိ ပုံ ရပြီး ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထား သည့် စစ်သွေးကြွများ သည် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗြိတိသျှတပ်ဖွဲ့၂ဦးကျဆုံးသွား
သည်မှာမှန်ကန်ကြောင်း အမှတ်(၃)ရော့ရှိုင်းယားတပ်မှဗိုလ်မှူး Laurence Roche ကမီဒီယာသို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အာဖဂန်စစ်မြေပြင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဗြိတိသျှ သားကျဆုံးမှုမှာ ၄၃၀ယောက် ရှိခဲ့ပြီး အာဖဂန်စစ် မြေ ပြင်တွင် ဘလက်ဟော့ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်မှုး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသော ဗြိတိသျှတော် ဝင်မင်းသားအား ဟယ်ရီ အား သတ်ဖြတ်မည်ဟု ပြီးခဲ့တပါတ်က မီဒီယာသို့ တာလီဖန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် ခြိမ်းခြောက် စကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှ အိမ်ရှေ့ စံ လောင်းသည် ပြစ်ခတ် မှု နှင့် ကိုက် ၁၀၀ ခန့် အကွာ တွင် ရှိ သည် ဟု ISAF တပ်မှုးတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှုး Martin Crighton က CNN ကို ပြောသည်။ တာလီဘန် နှင့် အခြား စစ်သွေးကြွ များ ၏ နေတိုး နှင့် အမေရိကန် စစ်သား အယောင် ဆောင် ပြီး တတိယ အကြိမ်မြောက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ကြည်းတပ် ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင် ဝတ်ဆင်ထား သည့် အကြမ်းဖက် သမား ၁၅ ဦးမှာ သုံးစုခွဲ ပြီး တိုက် ခိုက် မှု ကြောင့် အမေရိကန် မရိန်း တပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံး ကာ ကိုး ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိ ပြီးအကြမ်းဖက် သမား ၁၄ ဦး ကို ပြစ်သတ် နိုင်ခဲ့ ကာ တစ်ဦး ကို အရှင် ဖမ်းမိသည်။
၂၄ နာရီ အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် တိုက် ခိုက် မှု တွင် ပထမအကြိမ် ဉ် နေတိုး စစ်ရဲ ယူနီဖောင်းများ ၀တ် ဆင်ထား ကာ တပ် စခန်း တွင်း သို့ဝင်ရောက် လာ ခဲ့ ပြီး ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ ခန့်တန် သည့် AV-8B Harrier ဂျက် တိုက် လေယာဉ် ခြောက် စင်း ၊ စက်သုံးဆီ သို လှောင် သည့် ဂိုဒေါင် နှင့် စစ်သုံးဂျစ်ကား များ ကို ဖျက် ဆီး ခဲ့ ကြသည်။
စစ်သွေးကြွများ သည် မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ် ၊ ပစ္စတို ၊ လက်ပစ် ဗုံး နှင့် လောင်ချာများ ကို ကိုင်ဆောင် ထားကြ သည်။
မြို့ တော် ကဘူးလ် ၏ အရှေ့ပိုင်း ရှိ လာဂ်မန်း ခရိုင် တွင် ပြု လုပ် သည့် တနင်္ဂနွေ နေ့မနက် အစော ပိုင်းနေ တိုးစစ်ဆင်ရေး တစ်ခု တွင် အပြစ်မဲ့အာဖဂန် အမျိုး သမီး ရှစ် ဦး သေဆုံး ခဲ့ သည်။
တာလီဘန် အဖွဲ့က ထိုတိုက် ခိုက် မှု များ သည် သူ တို့၏ လက်ချက် ဟု ပြောသည်။
သမ္မတ အမိန့်အောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်း သမ္မတ အမိန့်နဲ့ သာ ရှေ့မတိုးပဲ ထိုးစစ်အရှိန်ရပ်လိုက် ရတာကို ခံပြင်း နေခဲ့တာကြာ ပါပြီ..။အောင်ပွဲဆက်တိုက်ရလာပြီးမှာ ရန်သူဌာနချုပ်အားသိမ်းခါနီး အချိန်လေးကို နိုင်ငံတော်အမိန့်နဲ့ ထိုးစစ် ရပ်ပြီး ခံစစ်ပြောင်းလိုက်ရတာ ကမ္ဘာ့စစ်သမိုင်းမှာ မြန်မာ တနိုင်ငံပဲရှိတာကို တွေ့ရပါ့ မယ်..။
အဲဒီအတွက် ရှေ့မတတ်ရပဲ ကေအိုင်အေ လုပ်သမျှ အသေခံနေရတဲ့ စစ်တပ်အနေနဲ့ ကေအိုင်အေကို တိုက်ချင်ပေမယ့် သမ္မတကြီး ကို လေးစားသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းနဲ့ စစ်တပ်မှာလည်း မုဆိုးမတွေများလာတော့ တယ်..။ အခုတော့ ကေအိုင်အေကို စစ်တပ်ကတိုက်စရာမလိုပဲ ကိုးကန့်နဲ့ "ဝ" တပ်ဖွဲ့တွေက တိုက်ပါတော့မယ်..။
ကေအိုင်အေ ဗုံးခွဲလိုက်တဲ့ဝေအောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က“၀”တပ်ဖွဲ့ရဲ့ စီးပွားရေးတာဝန်ခံ တာဝေ၊ သူ့ရဲ့ရှမ်းနာမည်က စိုင်းလျှံ၊ ရန်ကုန်မှာလဲနေတယ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်နဲ့ တရုတ်မှာလဲနေတယ်၊ ကုမ္ပဏီ ကကိုးကန့် အဖွဲ့နဲ့ “၀”တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါင်းပြီး ထောင်ထားတာ၊ တာချီလိတ်မှာ ရုံးရှိတယ်။ တာဝေက နာမည်ခံ ထားတယ်။ ဝေအောင်ကုမ္ပဏီအတွက် အကြီးမားဆုံးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက KIA ။ ဒီအဖွဲ့က ဖားကန့်မှာ အကြီးစားဓါးပြဂိုဏ်းပဲ၊ KIA ရှိတဲ့ဒေသမှာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဆက်ကြေး ၄ မျိုးရှိပါတယ်။ KIA လူကြီးတွေအတွက် သီးခြားပို့ရတဲ့ ဆက်ကြေး၊ အနီးဆုံး KIA တပ်မဟာက သက်မှတ်ထားတဲ့ဆက်ကြေး၊ အနီးဆုံး KIAတပ်ရင်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်ကြေး၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုက KIA လက်အောက်အရာရှိနဲ့ ရဲဘော်အဆင့်အထိ ယာဘဆေးပြားဖိုး၊ အရက်ဖိုး၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် မိန်းမလိုက်စားဖို့အတွက် လိုတဲ့ငွေကအစ ပေးရတဲ့ဆက်ကြေး။ ဒါတွေအားလုံးကို ဝေအောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ကိုးကန့်နဲ့ “၀”ခေါင်းဆောင် ပိုင်းက တစ်ရက်နောက်မကျစေဘဲ ပေးခိုင်းတယ်။ ဒီလိုပေးနေတာတောင် ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ KIA ရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ ဝနဲ့ကိုးကန့်လူကြီးတွေကို အတော်ပဲ နာကျည်းစေခဲ့ရတယ်။အဲဒီနေ့ KIA ၁၀ ယောက်ကျော် ကား ၂ စီးနဲ့ KIA တပ်ရင်း ၆ ရှိတဲ့ ကံဆီး ဘက်ကနေ ကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီဝန်းထဲကို ၀င်လာတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ မဲမဲမြင်သမျှ ပစ်သတ်တယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကုမ္ပဏီပိုင်ယာဉ်တွေ၊ စက်သုံးဆီပေပါတွေ၊ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်တွေ နဲ့ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးမှာသုံးတဲ့ ယမ်းတိုက်တွေမှာ မိုင်းတွေ ကိုထောင်ထားခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။ သိပ်မကြာခင် KIA က ထောင်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။ တစ်ဆက်တည်း ဆီလှောင်ကန်တွေ၊ ယမ်းတိုက်တွေပါ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ် ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကုမ္ပဏီဝန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘက်ဟိုးယာဉ် ၆၅ စီး၊ မြေသယ်ယာဉ် ၈၄ စီး၊ ကျောက်ဖောက်စက်တပ်ထားတဲ့ ယာဉ် ၅ စီး၊ လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဂါလံ ၆၀၀၀ ဆံ့ စက်သုံးဆီ သိုလှောင်ကန် ၇၀ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ အဲဒီညမှာပဲ နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ် တဲ့ ရွှေဂေါင်ဂေါင် ကုမ္ပဏီကိုလဲ အလားတူ ဖောက်ခွဲမှုကြီးတွေနဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဝေအောင်ကမ္ဘာဟာ ကိုးကန့်နဲ့ “၀”အဖွဲ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်း KIA တွေသိတယ်၊ သိရက်နဲ့ လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ့်အတွက် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမည်ဖော်ပြဖို့ငြင်းဆန်တဲ့ “၀” ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ကတော့ KIA ရဲ့လုပ်ရပ်အပေါ် ဒီလိုပြောပါတယ် “ကျုပ်တို့ချင်း နားလည်မှုယူထားတာ ဘယ်မှာ သွားထားမလဲ၊ ဒီ KIA ဟာ ငွေလဲယူတယ်၊ ကုမ္ပဏီကိုလဲဖျက်ဆီးတယ်၊ အစာစားပြီးတော့ စားတဲ့ပန်းကန်ကို သေးပန်း တဲ့ကောင်နဲ့ တူတယ်။ ဒါဟာ ကျုပ်တို့ကို သက်သက်ရန်စတာ၊ ဝေကုမ္ပဏီကို တိုက်ခိုက်တာဟာ ကိုးကန့်အဖွဲ့နဲ့ “၀”အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်တာပဲ။ KIA တွေ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတာပဲ ”လို့ နာကျည်းစွာ ဆိုပါတယ်။ “၀”နဲ့ ကိုးကန့် ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းတွေက ဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုး ယွမ် သန်းရာချီရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်ဆို ကျုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေ KIA အပေါ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာ လက်နက်၊ ခဲယမ်းတွေ ကျုပ်တို့အဖွဲ့တွေက အများကြီးထောက်ပံ့ထားတယ်။ KIA က လက်ငင်းငွေချေတာလဲရှိတယ်၊ အကြွေးနဲ့ဝယ်တာလဲရှိတယ်။ကုမ္ပဏီမှာ ရှယ်ယာပါဝင်ထားတဲ့ ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ပိုင်းတစ်ဦးကတော့ “ဒီလုပ်ရပ်အတွက် KIA ဟာ အရင်းရော အတိုးပါ ပြန်ပေးဆပ်ရမယ်၊ မသိလို့ လုပ်မိတယ်ဆိုတာက ခွင့်လွှတ်နိုင်ပေမယ့် သိသိနဲ့လုပ်တာကတော့ ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး၊ ရာသီအလိုက် အရောင်ပြောင်းတတ် တဲ့ မြွေလိုဆိုရင်တော့ ရန်သူပေါလိမ့်မယ်၊ သူတို့သတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းနဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲ။ KIA မှာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် မရှိဘူးလား၊ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလုပ်နေလဲ၊ လက်အောက် ငယ်သားတွေမသိလို့ပါလို့ ဆင်ခြေပေးရင် သိအောင် မအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ KIA ခေါင်းဆောင်တွေ ဦးနှောက်မရှိဘဲ ဘယ်လိုလူကြီးလုပ်နေလဲ” လို့ ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ ဒီလို ဆက်ပြောတယ် " ဒီလုပ်ရပ်အတွက် KIA ဆီက တိကျရှင်းလင်း တဲ့ တောင်းပန်မှု၊ ဖြေရှင်းမှုကိုကိုးကန့်နဲ့"ဝ"ဒေသထိပ်သီးပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်လူကြီးတွေ တောင်းဆို ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် KIA ရဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှုကမှ ကျုပ်တို့အတွက် ကျေနပ်စရာရှိလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့အဖွဲ့တွေ သေဆုံး၊ ပျက်စီး၊ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေအတွက်တော့ တန်ရာတန်ကြေး ပြန်ရဖို့ လိုမယ်၊ ကျုပ်မျက် စေ့ရှေ့မှာတင် သေဆုံးရတဲ့ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ကျုပ်တို့လူကြီးတွေ ကို တောင်းဆိုချင်တာက KIA ကို ထိထိရောက်ရောက် လက်စားချေဖို့ပါပဲ။ လက်အောက်ငယ် သားတွေအတွက် ဘာအကာအကွယ်မှမပေးနိုင်ရင် ဘာမှလည်းမခိုင်းနဲ့တော့။ KIA ကို မေးချင်တာက ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ချင်းကိစ္စမှာ ကျုပ်တို့ကိုးကန့်နဲ့ “၀”တပ်ဖွဲ့ကို ဆွဲထည့်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖားကန့်ဒေသရဲ့ စီးပွားရေးတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ အကြံလား။ မြေခွေးလိုကောက်ကျစ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ KIA အဖွဲ့ကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်းကသာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ်..အခု ကျုပ်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေးနေပြီ.။မကြာခင်မှာ ခင်ဗျားတို့ ကေအိုင်အေကို ကျုပ်တို့သိမ်းမယ်..။ တစ်ခုရှိတာက ကျုပ်တို့သိမ်းမှာက ကေအိုင်အေနဲ့ကေအိုင်အိုကိုပဲဖြစ်တယ်..။ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုသိမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး ..ကေအိုင်အေစစ်တပ်နဲ့ကေအိုင်အိုထိပ်သီးတွေကို ကျုပ်တို့လက် အောက်ကသေ ဆုံးသွား တဲ့ အဖွဲ့ဝင် တွေအတွက်.ကျုပ်တို့ရဲ့စီးပွါးရေးကို ဒုတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်..စီးပွါးဖက်ချင်း ပုခုံးချင်းတိုက် ရိုက်ချတဲ့အတွက် ကလဲ့စားချေ တာပဲဖြစ်တယ်..ကေအိုင်အေ ကိုသိမ်းပြီးရင်တော့ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ကို လွှဲပေးမြှာ ဖစ်ပါတယ်..။ကျွန်တော်တို့က ကချင်ပြည်နယ်ကို သိမ်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး..ကေအိုင်အိုနဲ့ကေအိုင်အေ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့ မိစ္ဆာကောင်တွေကိုပဲ တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်...။လို့ "ဝ"ဒေသ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက သံချပ်ကာကားတံခါးကို တဗုန်းဗုန်းပုတ်ရင်းပြောကြားပါတယ်..။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်စပ်မြို့ ကော့စ် ဘဇားခရိုင်တက် ကနက်မြို့နယ် အတွင်းမှ မလေးရှားသို့တရားမ၀င် ထွက်ခွာရန် ကြိုး စား ခဲ့သူ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၂၅ဦးကို ဘီဂျီဘီအမှတ်(၂၄) တပ်ဖွဲ့မှယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
တက်က နက်မြို့နယ်ရှိ ဂျာလီယာရွာပွိုင့် ရှာပူရီကျွန်းမှ စက်တင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့ မနက်အာရုဏ် ၃နာရီအချိန်တွင် ငါးဖမ်း ဘုတ်တ စီးဖြင့်ထွက်ခွားနေစဉ် ကင်းလှည့်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဘီဂျီဘီအမှတ် (၄၂)တပ်ဖွဲ့ လျှို့ဝှက်သတင်းအရ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်ဖမ်းဆီးခံထားသူများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ ၁၇ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ဦးဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၁၇ဦးကို တက်ကနက် ရဲဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ၄င်းတို့နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် လိုက်ပြီးဖြစ် သည်ဟု ဘီဂျီဘီ ပြောဆို ချက်အရသိရသည်။လူကုန်ကူမှုဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား ၇ဦးကို တက်ကနက် ရဲဌာန၌ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု သိရ သည်။
" ကျောင်းသူတစ်ဦး ရက်စက်စွာ မုဒိမ်းပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ "
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ၌ ကျောင်းသူ အမျိုးသမီး
တစ်ဦးအား မုဒိမ်းပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်
မှုကြောင့် ယမန် နေ့က ရုံးထုတ် စစ်ဆေးပြီး
ထောင်ဒဏ်ပေး လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
မုဒိမ်းပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသည့် ကျောင်းသူမှာ ဒက္ကာမြို့အနီး ဆီရာဂန်မြို့နယ်ရှိ အူလာရွာမှ ၉တန်း အရွယ်ကျောင်းသူ တဦးဖြစ်သည်။
ပြုကျင့်သူ Fahad Hossainသည် ရာဟူမီ၏သားဖြစ်ပြီး မုဒိမ်းပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသည့် ကျောင်းသူ ၏ ဦးလေးအိမ်၌ နှစ်လကြာ တည်းခိုနေသူဖြစ်ကာ ၄င်းတို့၏ မိသားစုနှင့် လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ကျွမ်းဝင် လာပြီးနောက် ယခုလိုပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၄ရက် (သောကြာနေ့)ညက အဆိုပါကျောင်းသူကို အဆောက်အအုံ ခေါင်မိုး အောက်သို့ ခေါ်ယူကာ စကားစမြည်ပြောနေစဉ် သူမအား မုဒိမ်းပြုကျင့် သတ်ဖြတ်လိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အဆောင်အောက်၌ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်၍ ဘာဟူဘာလ်မြို့နယ်ရှိ ဆေးရုံးသို့ မိုးလင်းအာရုဏ် ညဥ့်၂နာရီအချိန်တွင် ယူဆောင်ခဲ့သော်လည်း ဆေးရုံတွင် သေ ဆုံး ခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှုဖြင့် ၄င်းတရားခံအား Marzan ၏ဦးလေးက ရဲဌာန၌ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု အဆိုပါသတင်းတွင်ယနေဖေါ်ပြထားသည်။
""Schoolgirl killed after rape in Habiganj, cop's son arrested ""
The arrestee was produced in the judicial magistrate's court that sent him to jail hajat, police said.
Officer-in-Charge Azizur Rahman Sarker of Bahubal Police Station told this correspondent that the victim, Marzana Akhtar,aclass nine student of Ullapara High School in Sirajganj, had been staying at the house of her uncle Rafiqul Islam, sub-inspector of the police station, for the last two months.
Fahad Hossain, son of constable Ruhul Amin, and Marzina became familiar with each otherafew days ago. On Friday night, Fahad took the girl to the roof of the staff quarter for chatting and at one stage, he raped her.
Apprehending possible consequences of the incident, Fahad pushed Marzina to the ground. Critically injured Marzina was rushed to the Bahubal Upazila Health Complex where she succumbed to her injuries at 2:00am.
Soon after the incident, police arrested Fahad. Marzana's aunt Kamrunnahar filedacase, accusing Fahad of killing Marzina after rape.
Police sent the victim's body to Habiganj Sadar Hospital for autopsy. Assistant Superintendent of Police of Habiganj Mozammel Haque visited the spot yesterday.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့အတွက် ပင်လုံလို ညီလာခံကြီးတရပ် ကျင်းပပြီး ဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ် ဆိုရင် ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းစဉ်ကာလတည်းက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံအပြီးမှာ ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းက ပြီးဆုံးသွားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီလာခံက နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် ၆ချက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ် ၈ ချက်မှာ သဘောမတူညီတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့် အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ့် ပင်လုံလို ညီလာခံကြီးတရပ် ကျင်းပမယ်ဆိုရင် သူတို့လိုလားတဲ့ အချက်တွေကို ညီလာခံရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ဥက္ကာက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ပင်လုံကဲ့သို့ ညီလာခံမျိုး လုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ဘက်မှာလည်း မူအားဖြင့်တော့ ပြင်ဆင်မှု ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အဲလို ညီလာခံမျိုး စလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ အကြို ညှိနှိုင်းပွဲ စလုပ်ကတည်းက ကျနော်တို့ ပါဝင်ဖို့ လိုတယ်။ အစိုးရဘက်က၊ နောက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီဘက်က လူနဲ့ပဲ လုပ်ထားပြီးတော့မှ မင်းတို့လာလို့ ခေါ်တာကတော့ မကောင်းဘူး။ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် အကြိုညှိနှိုင်းပွဲ အဆင့်ဆင့် လုပ်သွားပြီးတော့မှ နောက်ဆုံး အဲဒီလို ညီလာခံမျိုး ကျင်းပရေး ကော်မတီအထိ ပါဝင်ချင်တယ်။ သူတို့က လူတွေ ရွေးထားပြီးတော့ ထိုင်၊ မင်းတို့လာထိုင် ဆိုရင် ဟိုအရင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံ ပုံစံမျိုးကိုတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။”
“အခုမြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကလည်း အဓိက လိုချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချဉ်းကပ်တဲ့ အခါကျတော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ပြည်နယ်အဆင့်မှာ အချက် ၄ ချက်၊ ၅ ချက် သတ်မှတ်ပေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ၈ ချက် သတ်မှတ်ပေးတယ်။ ဒီအချက် ၈ ချက်က ကျနော်တို့ဘက်က ကြည့်ရင် ကျနော်တို့နဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးတာလည်း မပါဘူး။ နောက် အထက်ကနေ အောက်ကို ချပေးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေတော့ ကျနော်တို့ လိုလားချက်နဲ့ တူညီမှုမရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီ ၈ ချက်အတိုင်း ကျနော်တို့က လိုက်နာလုပ်ဆောင်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံပဲ ခေါ်ခေါ်ပေါ့။ အစီအစဉ် agenda ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့။ ၆ ချက်။ အဲဒါကို ပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာလည်း ၆ ချက်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား။ သမ္မတကြီး ၈ ချက်ကိုလည်း ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးမယ်။ ကျနော်တို့ ၆ ချက်ကိုလည်း သမ္မတကြီး ဆွေးနွေးပါ။ အပြန်အလှန် ဒီအစီအစဉ် ၂ ခုကို ညှိတာနဲ့၊ agenda ညှိတာနဲ့ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အစပျိုးတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်သွားမယ် ဆိုပြီးတော့ ဒီညီလာခံကနေပြီးတော့ ညွှန်ကြားတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က ဆက်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။”
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ့် အချက် ၈ ချက်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ပါတီထူထောင်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင် လိုပါက လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး အများဆန္ဒနဲ့ ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုတာနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီ တခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ သဘောမတူနိုင်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
“အခု ကျမတို့ ချမှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာ အစိုးရနဲ့ တစုံတရာ နားလည်မှုရအောင်လို့ ကြိုတင်ပြီးတော့ လုပ်ရမယ်။ ဒီနားလည်မှု ရလာတဲ့အခါမှာ ကျမတို့တတွေကို ပြည်တွင်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်ရအောင်လည်း ခွင့်ပြုရမှာပေါ့။ အဲလို ခွင့်ပြုချက်တွေ ရလာလို့ရှိရင် တရားမ၀င်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုတွေ အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်း ကျမတို့တွေက ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ဆွေးနွေးရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ပြီးပြီးမှပဲ ကျမတို့တွေက ပြည်တွင်းထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်လို့ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီညီလာခံကလည်း အဲလိုပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။”
ပင်လုံလို တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ပါဝင်တဲ့ ညီလာခံကြီးကိုတော့ ၃ နှစ်လောက် အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုကောင်းလိုမယ် လို့လည်း ဦးခွန်ဥက္ကာက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ လက်ရှိသမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ပင်လုံလို ညီလာခံကြီးတရပ် ကျင်းပဖို့ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးစဉ်မှာ ပြောဆို ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ နမ္မတီးကျေးရွာ ဖော်ဒေါင်ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကချင်တိုင်းရင်းသူ မဂျာဒွဲနူးကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) က အခုလ (၁) ရက်နေ့က စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မစုဆောင်းသွားခဲ့ချိန်ကစလို့ ဘာသတင်းမှ မရရှိတော့တာကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ အထူးစိုးရိမ် ပူပန်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကေအိုင်အေတပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ မိုးကောင်းမြို့နယ် ကဆုန်းကျေးရွာအခြေစိုက် တပ်ရင်း (၁၁) က ကိုယ်ဝန် (၃) လ လွယ်ထားရတဲ့ မဂျာဒွဲနူးကို စုဆောင်းရေး ဆွဲသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဘရန်ဆိုင်းက RFA ကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"၉ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့စနေနေ့ ည ၁၀ နာရီ ၄၅ မှာ ကျွန်တော်အပြင်ကို မီးသီးသွားဝယ်တုန်း အချိန်လေးမှာပဲ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကျွန်တော်အသွားအပြန် ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၈၁ က တပ်သားအဆင့်ရှိ ချစ်အောင်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ရယ်၊ အဖော်တစ်ယောက်ရယ် ကျွန်တော့်မိန်းမကို စုဆောင်းရေးဆွဲတယ် ဆိုပြီးတော့ ဆွဲသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမမှာ ကိုယ်ဝန်ကလည်း ၃ လ ပါသွားတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ကို (KIA) ဋ္ဌာနချုပ်က လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုများအားလုံးကလည်း မိန်းမ ပြန်လာဖို့အတွက် ဆုတောင်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာပြီး အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အသနားခံပြီးတော့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်"
ဒီလ ပထမပတ်အတွင်းက မိုးညှင်းခရိုင် မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ နမ့်ချီမှော်ဒေသမှာ KIA တပ်ရင်း ၅ ကအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၅၀) ကျော်ကို စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မ စုဆောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်းကို အာအက်ဖ်အေ ၀ိုင်းတော်သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
''မလေးရှားတွင် ရခိုင်အမျုိုးသားတစ်ဦး လုယက် အရိုက်ခံရ"
မလေးရှားနိုင်ငံ KL""ကိုတာယာရာ"" ဇေယျာစားသောက်ဆိုင်(မြန်မာဆိုင်)အနီးတွင် ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးကို လူအုပ်တစ်စုက ရိုတ်နှက် လုယက်သွာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်ပုံမှာ ၁၆.၉.၂၀၁၂ နေ့လည်းပိုင်လောက် မြန်မာဆိုင်များက ဈေးဝယ်လို့ပြန်လာရင်း လူအုပ် တစ်ခု ပြေးဝင်လာပြီး ပိုတ်ဆံအိပ် နဲ့ငွေများကို လုယူသွာကြောင်း သိရသည်။
ယခုလို့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ARRC ထွေထွေအတွင်ရေးမူးကိုစောသန်း ကရွှေမြန်မာမီဒီယာ ကိုယခုလို့ ပြောသည်။
"ဟုက်တယ်ဗျာ။စနေ ၊တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုရင် ကေအယ် မြို့ ထဲမှာခဏခဏမြန်မာတွေ အလုခံရတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ တစ်ယောက် ထဲ မသွားကြဖို့ သွားရင်တော့ သတိဝီရယနဲ့ သွားကြဖို့ ပြောချင်တယ်ဗျာ။ ဟုရွှေမြန်မာမီဒီယာဂရုကိုပြောသည်။
အဆိုပါလူလုယက်အုပ်စုက မလေးရှားနိုင်သားများနဲ့ အန္ဒိယလူမျိုးများဖြစ်ကြဟသည်ဟု သိရသည်။
အလုခံရသောရခိုင်လူမျိုးမှာ ရသေ့တောင်မြို့ နယ် မြောင်ဂန်ဂျိုင်းကျေးရွာမှ ကိုမောင်လင်းဟုသိရသည်။
ကိုမောင်လင်းမှာ ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာနည်းနည်း ရသွားသည်ဟု သိရသည်။ လမ်းသွားလမ်းလားများ အထူး သတိထား ရှောင်ကြည်သွားရန်နဲ့ မြို့ထဲသွားရင် ပိုတ်ဆံများများထည့် မသွားကြဖို့ ကိုစောသန်းက ပြောပြသည်။
၈ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အရေးပေါ် လှေကားပြုတ်ပြီး လူသေဆုံးမှု (သတင်းအပြည့်အစုံ)
၈ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အရေးပေါ်လှေကားပြုတ်ပြီး လူသေဆုံးမှု ကမာရွတ် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် စက်တင် ဘာလ ၁၆ရက် နေ့ ညနေ ၄နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်
ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အမှတ်(၁)အထပ် သားစက်ရုံ၊ ဓားသွေးဝန်ထမ်းဖြစ်သူ ဦးသန်းဝင်း (၃၅နှစ်) ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူသည် ကမာရွတ်မြို့နယ် ၅ရပ်ကွက် အမှတ်၂၂၃၊အခန်း ၅၀၂၊ ၆လွှာ၊ စပယ်မာဃလမ်းရှိ ပိုင်ရှင်ဦးခင်မောင်ညွန့် ပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်ခန်းနောက်ဘေးတွင် ရေပိုက်ပြုပြင်နေစဉ် အရေးပေါ်လှေကား ပြုတ်ထွက်ရာယင်း ခြောက်လွှာအမြင့်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြုတ်နေသော အရေးပေါ်လှေကားအား စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ ညပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
အခင်းဖြစ်ပွားရာ အထပ်မြင့်တိုက်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးကလည်း ''အိမ်ရှင်တွေက ပြာင်းလာတာ နှစ်လ လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ပြောင်းလာပြီးကတည်းက အိမ်ကိုပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာကိုတော့ တွေ့ရတယ်။
အခုလို ရေပိုက်ပြုပြင်ရင်း ပြုတ် ကျသေဆုံးတာဆိုတော့ နောင်ရေပိုက်တွေပြင် ချင်ရင် လုပ်ပေးမယ့်သူ မရှိမှာတောင် စိုးရိမ်မိပါတယ်''ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ဒုရဲအုပ်မျိုးသန့်က'' အခုလို အထပ်မြင့် တွေမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အသက် အန္တရာယ်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အကူကရိယာတွေ အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင် ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ ခေါ်ယူအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့လည်းလို အပ်ပါတယ်''ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆောက်အအုံသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ပန်းတိုင်ဆောက်လုပ်ရေးမှ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲသို့ အရေးပေါ်လှေကားများ၏ အရည်အသွေးလျော့နည်းမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုနှင့်ပတ်သတ်၍တာမွေမြို့နယ် မေတ္တာညွန့် ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးကလည်း ''ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက အခုလို အရေးပေါ်လှေကားပြုတ်လို့ လူသေဆုံးခဲ့
တဲ့ဖြစ်စဉ် ရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ သုံးဖို့ စိတ်မချရတဲ့ အရေးပေါ်လှေကားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှာလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြုတ်နေသော အရေးပေါ်လှေ
ကားအား စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ ညပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
ဆောက်လုပ်တဲ့ သူတွေကလည်း အရေးပေါ်လှေကားတွေကို အဖြစ်ပဲ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ သလို ဒီအဆောက်အဦ တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဏာပိုင်အဖွဲ့က စစ်ဆေး သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စတာတွေဟာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေ ပါတယ်''ဟု ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၂/၂၀၁၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် သေဆုံးသူအား ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင် စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းကလည်း အလုံမြို့နယ် စောရန်ပိုင် (မြောက်)ရပ်ကွက်၊ ငုဝါလမ်း၊တိုက်အမှတ် ၂၀၀၊၆လွှာ/ဗ မှ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် မသက်ထက်စံသည် အိမ်နောက်ဖက် အရေးပေါ်လှေကား၌ ဖုန်းပြောနေစဉ် ယင်းအရေး ပေါ်လှေကားနှင့်အတူ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့သည်။
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် Eleven ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု တစ်ခု အကြောင်း
ယခုတစ်လော သတင်းကြီးနေတဲ့ KIA နဲ့ စစ်တပ်တို့ရဲ့ ဖားကန့်တိုက်ပွဲ အကြောင်းဟာဆိုရင် Online စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တော် တော်လေး ပျံ့နှံ့သတင်းကြီးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာ ဖတ်ရှုရင်းနဲ့ ဘယ်သတင်း ဘယ်အ မှန်ဆိုတာ ဝေခွဲ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို ဖတ်ရင်းနဲ့ အမြဲ ကြည့်ရှုနေကြ ဖြစ်တဲ့ The Voice ၊ Eleven၊ Popular ၊ မြဝတီတို့ကို ဖတ်ခဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ တွေ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ် သတင်းတွေထက် အောက်မှာ ရေးသားနေကြတဲ့ comments တွေက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မြဝတီကိုတော့ တပ်မတော်ပိုင်မို့ KIA ကို အပုပ်ချတယ်ဆိုပြီး KIA လို့ ယူဆရတဲ့ လူတွေက comments တွေ ရေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါ Eleven ကို ဝင်ကြည့်ပြန်တော့ စစ်တပ်က ပစ်တယ် ခတ်တယ် ဖြစ်ပြန်ရော။ အဲဒီမှာတင် စစ်တပ်လိုလားသူ အချို့တွေက ဒီလို မတင်သင့်တဲ့ အကြောင်း၊ အစိုးရကို မကောင်းပြောလွန်းကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လုပ်နေ ကြောင်းတွေ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ ထူးခြားတာက မြဝတီဟာဆိုရင် ရေးသားသမျှ comments တွေကို ဖျက်တာတွေ မပြုလုပ်ပဲ၊ ဝေဖန်သမျှတွေကို လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်တွေ ပြုနေခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ဒီအချိန်မှာပဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် တစ်ခုဖြစ်တဲ့၊ ပြည်သူတွေ အလေးထားဖတ်နေတဲ့ Eleven ကတော့ ပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကို သွေးမခွဲသင့်ဘူး၊ ကြည့်သူတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေကို အလေးမထားပဲ comments တွေကို ဖျက်နေတာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံတွေဟာဆိုရင် comments တွေ မဖျက်ခင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံတွေဟာဆိုရင် comments တွေ ဖျက်ပြီးချိန် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ပေးပို့ - ကိုမြမင်းမောင် (စင်္ကာပူ)
KIA မှ ဆက်ကြေးကောက် ၊ လူသစ်စုကြောင်း ဦးလနန်မှ ပြော...
လွှတ်တော်ရဲ့ အထက်မှာ မိုးကောင်းကင်ကြီးပဲ ရှိသတဲ့လ...
သို့ / ၇ ရက်သတင်းဂျာနယ်တွင် အမြန်ပါရှိရေးတောင်းဆို...
""မလေးသွား မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၂၅ဦးဖမ်း...
အမျိုးသမီး ရင်သားကို နေ့စဉ် ကြည့်ရှုခံစားသည့် အမျို...
အမေရိကန် တပ်သား အယောင်ဆောင် ပြီး တိုက်ခိုက်မှု ကြော...
မလေးသွား မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၂၅ဦးဖမ်းဆီ...
" ကျောင်းသူတစ်ဦး ရက်စက်စွာ မုဒိမ်းပြုကျင့် သတ်ဖြတ်...
မြန်မာ ပင်လုံလို ညီလာခံခေါ်ယူဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကချင်တိုင်းရင်းသူ KIA က စစ်သားအဖြစ် အ...
''မလေးရှားတွင် ရခိုင်အမျုိုးသားတစ်ဦး လုယက် အရို...
၈ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အရေးပေါ် လှေကားပြုတ်ြ...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် Eleven ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု တစ်ခု ...
KIA ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ...
ပျူမြို့များ ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ရေး မဝင်ရေး ...
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများမှ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးများအားလံ...
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းရှစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံသို့ ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံ-တရုတ်ကုန်စည်ပြ...
အရှေ့ တရုတ်ပင်လယ် အတွင်းမှ မြင့် တက်လာသည့် တင်းမာမ...
ရုရှား၊ အီဂျစ်၊ ဘရုနိုင်း၊ သြစတြေးလျ ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ ...
SEA Games ကျင်းပမည့် နေပြည်တော်က အားကစားရုံ (၈၅) ရ...
ဝေအောင်ကမ္ဘာကုမ္ပဏီကို ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခဲ့မှုဟာ KIA အဖွ...
KIA ကို UWSA "ဝ" မှ ထိုးစစ်ဆင်မည်
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ဆက်လက် စုံစမ်းစစ...
ရှမ်းခေါင်းဆောင် ခွန်ထွန်းဦးကို ကုလညီလာခံ မြန်မာကိ...
အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှု...
ဘိုလစ်ဗီးယား၊ ဗင်နီဇွဲလားနှင့် မြန်မာတို့ မူးယစ်ဆေ...
"'မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီ (၆) ဦး ရာဘာ...